प्रायः हरेक पत्नीले लुकाउछन् पतिसँग यी कुराहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
प्रायः हरेक पत्नीले लुकाउछन् पतिसँग यी कुराहरु !!
पति पत्नीको सम्बन्ध अटुट विश्वास र प्रेममा टिकेको हुन्छ। दुबै एक अर्कालाई हरेक कुरा शेयर गर्ने गर्दछन्। तर हरेक मानिसको कुनै न कुनै कुरा गोप्य हुने गर्दछन्, जुन कुरा नजिकको साथीसँग पनि गोप्य राखिन्छन्।
यस्ता कयौँ कुरा हुन्छन्, जुन पत्नीले पतिसँग शेयर गर्दैनन्। महिलाले पतिसँग गोप्य कुरा शेयर नगर्नु यो हैन की उनले आफ्नो पतिलाई धोका दिदैछिन्।
कयौँ पटक उनीहरुले आफ्नो सम्बनधलाई बचाई राख्नका लागि कयौँ कुरा शेयर गर्दैनन्। आफ्नो घरमा शान्ति बनाइ राख्नका लागि उनीहरुले यस्ता कुरा गोप्य राख्ने गर्दछन्। हामी हामी महिलाले प्राय गोप्य राख्ने कुराका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
महिलाले आफ्नो पतिलाई आफूले उनको जासुसी गरिरहेको कुरा थाहा हुन दिदैनन् । जसका लागि उनीहरुले कयौँ पटक आफ्नो पार्टनरको मोसल मिडिया ह्याक गर्ने तथा फोन चेक गर्ने गर्दछन्। नयाँ पुस्ता बाट सभार